बबिताले जन्माइन् दुई टाउको र तीन हात भएको अनौठो बच्चा ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/बबिताले जन्माइन् दुई टाउको र तीन हात भएको अनौठो बच्चा !
एजेन्सी– संसारमा कहिले काहीँ अनौठा र रोचक घटना घट्छन् । मान्छेलाई पत्याउनै मुस्किल हुन्छ । एउटा यस्तै घटना हालै भारतमा घेटेको हो । जहाँ एक महिलाले अनौठो बच्चालाई जन्म दिएकी छिन् । भारतको मध्ये प्रदेशको विदिशा लिल्लाको घटना हो ।
ती महिलाले दुई टाउको, तीन हात र चार पञ्जा भएको बच्चाको जन्म दिएकी हुन् । उक्त समाचार अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । यस बच्चालाई देखेर चिकित्सकहरु पनि हैरान बनेका छन् ।
मध्येप्रदेशको विदिशा जिल्लास्थित गंज बसौदाकी २१ वर्षीया बबिता अहिरवारले उक्त बच्चा जन्माएकी हुन् । उक्त नवजात शिशूको दुई वटा टाउको, तीन हात छन् । बच्चाको घाँटीमै अर्को टाउको जोडिएको छ । दुई हात सामान्य भए पनि तेस्रो हात भने बच्चाको दुईवटा टाउको जोडिएको बीचभागबाट निस्किएको छ ।
बबिताको विवाह करिव डेड वर्ष अघि भएको थियो । यो उनको पहिलो बच्चा भएको अस्पतालले जनाएको छ । बबिता जब गर्भवती थिइन्, तब उनीमा जुम्ल्याहा बच्चाको चासो राख्ने गर्थिन् । त्यसैले पनि यस्तो बच्चाको विकास भएको हुनसक्ने पारिवारका सदस्यले बताएका छन् ।
तर, सामान्यतया यस्तो अवस्था त्यसबेला हुन्छ , जब महिलाको गर्भमा भ्रूणको ठिक रुपमा विकास हुन सक्दैन । यो स्थिति एक लाखमा एक जनामा त्यो पनि विरलै मात्रामा हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् । उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार विदिशामा भने यो पहिलो घटना भएको हो ।
विदिशा जिल्लाका चिकित्सकले बताए अनुसार बच्चाको एक हातमै दुईवटा हत्केला छन् । सवैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा उक्त नवजात शिशूको जम्मा एउटा मात्र मुटु भएको चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।